Etu ị ga-esi nweta bara nnukwu uru na Brawl Stars | Gam akporosis
Etu ị ga-esi nweta bara nnukwu uru na Brawl Stars
Onyeka Onwenu | | Egwuregwu gam akporo
O nwere ike ịbụ otu n'ime egwuregwu vidio na ịrị elu n'agbanyeghị na enwere ya n'efu maka oge ụfọdụ maka sistemụ gam akporo na iOS. Mbido ya na njedebe nke 2018 mere ka ọ nweta ọtụtụ nbudata, na-eru taa ihe karịrị 100 nde na gam akporo na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ọgụgụ ahụ na ngwanrọ Apple.
Na Brawl Stars ị nwere ike imeri bara nnukwu uru, ma ị ga-akpachara anya na ngwa ndị ahụ na-ekwe nkwa ime nke a ma nwee ihe ịga nke ọma ịnwe iwu gị. Enwere ọtụtụ usoro iji nwee ike inweta okwute a dị oke ọnụ ahịa iji jiri zụta igbe igbe, igbe mega na igbe buru ibu, yana mkpụrụedemede pụrụ iche, skins, tiketi na akara ngosi.
N'ime aha a maara nke ọma bụ micropayments nke ga-aga n'ihu n'ụzọ ọsọ ọsọ ma nweta ihe dị iche iche, n'etiti ihe ndị nwere ike ịhazi agwa ahụ. I nwere ike iji ọtụtụ ihe bara nnukwu uruYa mere, inwe ọtụtụ ga-enye anyị ohere ịzụta ihe dị iche iche site na egwuregwu vidio.
1 Kedu ihe bụ Brawl Stars banyere
2 Nweta bara nnukwu uru na igbe
3 Nweta ihe bara nnukwu uru na Brawl Pass
5 Na GameHag
6 Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji nweta 5699 ma ọ bụ 8199 mkpụrụ obi mkpụrụ obi? / H2>
7 Mkpa ọ bara nnukwu uru
8 Gbapụta Gems na ClipClaps
9 Gwuo egwu iji merie igbe
Kedu ihe bụ Brawl Stars banyere
Brawl Stars bụ freemium ọtụtụ ndị na-eme ntanetị maka ngwaọrụ mkpanaka. Ebumnuche nke egwuregwu ahụ bụ iji nweta ọnụ ọgụgụ kachasị nke trophies ma ọ bụ iko. Ndị na-egwu egwu ga-egwu egwuregwu dị iche iche, yana ihe odide dị iche iche ịhọrọ na onye ga-alụ ọgụ ịrịgo n'ọkwá.
Ndị na-egwu Brawl Stars ga-enwe ike isonyere klọb na ezinụlọ na ndị enyi, na-egwuri egwu n'etiti onwe ha, yana igwu usoro ndị a: Nanị Nlanarị, Heist, Siege, Trap, Duo Survival, Brawl Ball, Starfighter, Starfight, Amachibidoro Mpaghara, Megabrawl, na All megide Otu.
Na Brawl Stars a ga-agụ trophies na ọnụ ọgụgụ onye ọkpụkpọ, a na-enweta ha na ihe omume nkịtị mgbe ha na-emeri egwuregwu ahụ. Otu ihe dị mma bụ imeri ha, ma ọ bụrụ na ị tụfuo ha ga-apụ n'anya, yabụ na-asọ mpi iji merie ma chịkọta ihe kachasị na gallery gị.
Nweta bara nnukwu uru na igbe
Usoro iji merie bara nnukwu uru na Brawl Stars bụ imeghe igbe ndị ahụ nke ahụ ga-enwe ike nweta otu bara nnukwu uru na nke ahụ ga-aga ozugbo ị gafere n'otu egwuregwu ahụ. Kpakpando Brawl nwere mkpokọta igbe atọ dị iche iche ma ha bụ ndị na-esonụ: Igbe Brawl, Nnukwu igbe na igbe Mega.
Nke mbụ bụ otu n’ime ihe kachasị mfe, mana ịnweta Nnukwu igbe na igbe Mega ga-egwu obere oge na ọ bụ ihe kachasị ọnụ ahịa na egwuregwu ahụ. Megaboxes ga-enye anyị ọtụtụ ọla, Yabụ, ọ bụrụ na ị nweta nke ọ bụla, ị ga-enwe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu karịa igbe Brawl na Nnukwu igbe.
Anyị nwere 10% ohere na ọ na-emetụ bara nnukwu uru, Igbe Brawl ga-enye anyị ihe bara uru 5 n'efu, nnukwu igbe ga-enye 15 bara nnukwu uru na Megaboxes nwere ike inye anyị ihe bara nnukwu uru 25. Nke ikpeazu bu otu ihe kachasi mkpa na agha Royale a, mana o yikarịrị ka o gha enwe mmeri.
Megabox ga - enwetara ya site na imefu nnukwu ọnụ, ihe niile ga-adabere na oge a raara nye igwu egwu aha a dị mkpa nke na-aga n'ihu na-enwe nnukwu obodo n'azụ ya. Nanị ụzọ ị ga-esi nweta ihe bara nnukwu uru bụ igwu egwu na mmeri n'ọgụ ndị enyi, ndị enyi na ndị na-alụso anyị ọgụ.
Nweta ihe bara nnukwu uru na Brawl Pass
Ndị mmepe nke Brawl Stars hapụ ọnọdụ Brawl Pass site n'oge ruo n'oge, ihe omume nke ị na-enye ụgwọ ọrụ na nke ọ bụla mmeri na ọrụ zuru oke. Brawl Pass nwere ụzọ abụọ, otu n'efu na otu akwụ ụgwọ, ha abụọ dị mkpa na karịa ihe niile na-atọ ụtọ.
Paymentgwọ ịkwụ ụgwọ Brawl Pass, ịbanye na ya ga-efu anyị ihe dị egwu 169, yabụ anyị ga-echekwa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta njem a. Free Brawl Pass na-enye ụfọdụ ihe n'etiti ha bụ igbe, mkpụrụ ego, ibe na ihe bara nnukwu uru, yabụ na ị ga - enwe ike iji nweta ọla bara uru.
Na-arụ ọrụ niile ị ga - enweta na Brawl Stars ngụkọta nke 90 bara nnukwu uru, ihe niile ga-adabere na ọkwa ndị ị na-enwe ọganihu ruo mgbe ị ruru ọgwụgwụ. Ọkwa 2 na-enye 10 bara nnukwu uru, ugbua na ọkwa 14 ị nweta 10 bara uru ọzọ, ọ bụrụ na ị rute n'ogo 22 ha ejiri okpukpu abụọ ruo abụọ, ugbua na ọkwa 20 enwere ihe 36, na 10 ọzọ 44 bara nnukwu uru, na 10 ha ga-enye 52 ọzọ ma rute 10 bụ bara nnukwu uru 20 ọzọ. Ntughari ọ bụla ị ruru bụ ihe bara nnukwu uru 20, nke zuru ezu iji nweta ha n’efu.
A na-azụta nnukwu igbe na igbe Mega na ụlọ ahịa Brawl Stars, ọ bụ ezie na onye mbụ n’ime ha nwere ike merie dị ka ụgwọ ọrụ site n’inweta trophies. Ihe dị mma bụ ịrịgo n'ọkwá ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmeghe ha, yabụ ebumnuche bụ igwu egwu mgbe ọ bụla ịchọrọ ị nweta akụ bara uru, nke ị nwere ohere 9% nke ha ga-emetụ.
Ọ bụla igbe iri ị na-emeghe, eleghị anya ị ga-enweta dịkarịa ala 1 ka nwere bara nnukwu uru, Ya mere, ọ bụ obere ohere na ị ga-ewere ụfọdụ. Gems dị mkpa mgbe ọ bịara ịgbapụta ha iji nweta ihe dị iche iche, Na mgbakwunye ịbanye na Brawl Pass, ebe ị nwere ohere abụọ, otu n'ime ha bara nnukwu uru.
Ekewara igbe ndị a: Brawl Boxes, ha na-enwekarị ihe dị 3 ma ọ bụ 5, nnukwu igbe na-esi na 3 gaa na 15 bara nnukwu uru, megabox na-enwekarị 3 ruo 25 bara nnukwu uru. Nke mbụ, n'agbanyeghị enweghị ọtụtụ, bụ nke metụrụ anyị aka karịa nke abụọ ma ọ bụ nke atọ.
Gamehag bụ peeji ebe ị ga - enweta mkpụrụ obi bara nnukwu uru ma gbanwee ha maka bara nnukwu uru site na Brawl Stars, mgbanwe nke bara uru maka oge a. Site na usoro a, ndị sava agaghị akwado gị ma ọ bụ veto ya, ọ bụ otu n'ime iwu na ihe dị mkpa, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-eji ya taa.
Ọrụ ndị a ga-eme bụ ihe ndị a: Gwuo egwuregwu, kpọọ minigames, ọrụ zuru ezu, bulite vidiyo na YouTube na-ekwu maka Hamegag, larịị, kpọọ ndị enyi, were nyocha, budata ngwa, budata ngwa GameHag, kwuo okwu na forums, kekọrịta ọdịnaya na Facebook ma rụọ ọrụ email.
Ozugbo inwere nkpuru obi nkpuru obi 5.699 ị nwere ike ịgbanwe ya ihe dịka $ 10, nke na mgbanwe ahụ bụ ihe gbasara 130 bara ụba site na Brawl Stars, nke n'ikpeazụ bụ ihe anyị chọrọ, iji nweta ihe bara nnukwu uru. Iji ruo 8.199 bara nnukwu uru nke mkpụrụ obi, mgbanwe ahụ na-enye ihe dịka dollar 15, nke na ngbanwe ahụ gbara gburugburu 200 bara nnukwu uru. Na ihe ndị ahụ bara nnukwu uru ị pụrụ ịzụta Brawl Pass.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji nweta 5699 ma ọ bụ 8199 mkpụrụ obi mkpụrụ obi? / H2>
N'oge kachasị oge nke otu izu ọ ga-ekwe omume ịnweta ọtụtụ mkpụrụ obi bara nnukwu uru ịgbanwee ha maka Brawl Stars bara nnukwu uru. Kekọrịta ọdịnaya ahụ ga-ewetara gị ọtụtụ isi ma mee ka ha niile mee site na ịrara opekata mpe otu elekere kwa ụbọchị, n'etiti 2 ruo 3.
Ọ bụrụ na ị kpebie igwu egwuregwu GameHag, oge ga-efe na ihe kachasị mma bụ ịnwe ike ị nweta mkpuru obi iji gbanwere ha maka ihe egwuregwu egwuregwu gam akporo gam akporo. Brawl Stars na-erite uru site na nke a maka nkwekọrịta nke GameHag ruru, nke n'aka nke ozo na-enye otutu oge.
Opekempe nke dollar 10 (5.699) ga-ekwe omume site na otutu ndi mmadu n’oge nke n’abia ano rue ubochi ise, ma ihe nile n’eme ulo, igwu egwu na otutu. GameHag bụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma ma ewezuga ịbụ otu n'ime ndị Brawl Stars na-ejikarị eme ihe, ihe karịrị ọkara na-eji ya iji tinye bara nnukwu uru.
Mkpa ọ bara nnukwu uru
Gems na-emeghe ụzọ maka ọtụtụ ihe na Brawl Stars, ọ bụ ya mere ndị chọrọ iji merie ha ka ha tinye ọtụtụ ka ha nwee ike ịga n'ihu mgbe ọtụtụ awa gachara. Na bara nnukwu uru ị nwere ike ịzụta ihe ndị a: Agwa, skins, igbe, Brawl Pass na token multipliers.
Ihe bara nnukwu uru ga - eme ka ị nwee ọganihu n’egwuregwu ahụ, ma karịa ihe niile, hazie akara ngosi ọ bụla iji gosipụta oke osimiri dị mma na egwuregwu. Na Brawl Stars ndị bara nnukwu uru nwere dị ka ha isi uru irite iji melite ụfọdụ ihe, na-enweghị ịzụta ha na Storelọ Ahịa Play.
Enweghị mkpa itinye ego na ụlọ ahịa na anụ ahụ Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnakọta bara nnukwu uru n'efu, igwu egwu na imefu oge ị ga-enweta ọtụtụ n'ime ha na njedebe nwere otu ojiji ahụ, ọganihu. Brawl Stars bara nnukwu uru iji nweta ọtụtụ ga-enyere gị aka inweta ọtụtụ ihe, gụnyere igbe.
Gbapụta Gems na ClipClaps
Enwere ike gbanwere Clapcoins maka dollar ma ọ bụ maka igbe, Clapcoins dị mkpa na ClipClaps, nke bụ ya mere ọ bụrụ na ị na-egwu iji kpata ihe bara nnukwu uru ọ bụ saịtị dị mkpa. N'ihi dollar ị ga-enwe ike ịgbanwe ha maka ihe bara nnukwu uru, nke na-emecha dị mkpa ma a bịa n'ịgbanwe ha maka akụ dị oké ọnụ ahịa nke Brawl Stars.
Ihe kachasị mma bụ na ọ na-anabata mba niile, yabụ ọ bụrụ na ịnọ na Spen ị nwere ike ịga na saịtị ClipClaps iji nweta ego wee mechaa gbanwee ha maka ihe bara nnukwu uru. Ọ bụrụ na ị nweta 10 ma ọ bụ 15 dollar zuru ego inwe ike iru ihe mgbaru ọsọ nke ị setịpụrụ site na mmalite.
Gwuo egwu iji merie igbe
Site na ịrara ọtụtụ awa nke ụbọchị Brawl Stars ị ga-agbakwunye ahụmịhe na n'elu ihe niile ị ga-enweta obi ndị dị oké ọnụ ahịa dị oké ọnụ ahịa na ya nwere ike ịbụ ihe bara nnukwu uru ị na-achọ. Ọ dabere na gị ma ị na-akwụ ụgwọ karịa ma ọ bụ obere, mana karịa ihe niile gbasara ohere ndị na-abụghị ọtụtụ mgbe ị na-emepe igbe.
GameHag bụ otu n'ime ọrụ ndị na-aga n'ihu na-arụ ọrụ zuru oke taa, bara uru ịnwe ya mgbe niile iji nweta ihe bara nnukwu uru, niile dabere na ọrụ na ịchụ àjà. Maka ndị ọzọ, ọ bụ otu n’ime ndị iwu kwadoro ma ha na-anọgide na-arụ ọrụ zuru oke n’enweghị mkpa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Etu ị ga-esi nweta bara nnukwu uru na Brawl Stars
WIKO VIEW 5 Plus: Nyocha, Nkọwapụta na Ahịa
Ngwa 5 kachasị ụgwọ maka gam akporo